नेपाली काँग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली जीवन यात्रा – Bikash Khabar
बुधबार, ०१ बैशाख २०७८ गते २०:५२ मा प्रकाशित	Author विकास खबर संवाददाता	Comment(0)	267 Views
नेपाली काँग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली प्रदेश नं. ४ नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलका नेता हुनुहुन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको २०७४ सालमा भएको ऐतिहासिक पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनमा उहाँ प्रदेश नं. ४ नवलपरासी पूर्व १ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो।
एकीकृत समाजवादी र जनवादीबीच पार्टी एकता
१३ पुष,काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा जनवादी पार्टीबीच एकता भएको छ । एमाले विभाजन गरेर माधव नेपालले बनाएको